I-Interior 2018: Izitayela ezi-5 eziphambili zonyaka ezitholakala kuwo wonke umuntu - Indlela yokuphila 2022
I-Interior 2018: Izitayela ezi-5 eziphambili zonyaka ezitholakala kuwo wonke umuntu
I-2018 izoletha imibala ekhanyayo nemininingwane ngaphakathi.
Umkhuba oyinhloko wangaphakathi we-2018 ukuhlukaniswa kwabantu abaningi kanye nemizwelo. Ochwepheshe bathembele ekuxubeni kwezitayela nezitayela, endaweni ethile, eziveza kangcono ubuntu bomnikazi wendlu kanye nalokho akuthandayo.
Okhaphethi sebebuyile emfashinini. Kodwa ungasheshi ukuthola ukhaphethi omdala omuhle kusukela kuma-90s, ngoba umkhuba uzoba iziqu zesitayela esihluke kancane: esinemibala eminingi, enamaphethini wejometri kanye nokubunjwa okuthakazelisayo.
Kungcono ukukhetha amakhaphethi anephethini engabonakali kakhulu.
Abaqambi bathi isizini entsha ibona ukusuka ku-minimalism ebibusa eminyakeni yamuva. Ngo-2018, ukuphrinta okuhlukile kanye nemihlobiso kuthrendi, kanye nenhlanganisela enemibala yezitayela ezahlukene ezikhumbula ukubuya kwama-80s.
I-Velvet yangena emfashini ngo-2017 futhi yangena ngempumelelo ku-2018. Ngenxa yakhe, ungakwazi ukwengeza ukuthintana kokunethezeka kwansuku zonke kunoma iyiphi ingaphakathi, kodwa into eyinhloko lapha akufanele uyidlule. Kungcono ukugxila emthunzini we-velvet njengesafire, i-citrine, i-emerald, i-amethyst ne-pink garnet.
Ngo-2018, umklami kanye nezingcezu zangempela zefenisha - izimo ezingavamile ezifana nohlobo oluthile lwezithombe - ziyaziswa ngaphakathi. Kodwa kufanelekile ukucabangela ukuthi akufanele kube nezinto eziningi ezinjalo ngaphakathi.
Njengoba ikhulu lama-21 kuyinkathi yokuxhumana nabantu, ngo-2018 udonga lwe-accent lufika emfashini, okukhumbuza i-akhawunti yomuntu siqu kwenye yazo. Isibonelo, lapho umnikazi angabonisa khona impilo yakhe nezinto azithandayo. Lena ingxenye yangaphakathi ngenxa yohlaka, engasetshenziswa njengendawo yesithombe.
Akuyona isithukuthezi ngesithukuthezi: indlela yokubhekana nayo nokuthi ungaba kanjani umuntu oyisicefe